"ဘိတ်ကလာတဲ့ငံပြာရည်" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
"ဘိတ်ကလာတဲ့ငံပြာရည်" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ
၀၉:၅၀၊ ၂၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ
၇၈၈၅ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၇ လ
၀၉:၃၉၊ ၂၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
၀၉:၅၀၊ ၂၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
ဒါရိုက်တာကြီး ဘိတ်ကလာတဲ့ ငံပြာရည်၏ အမည်ရင်းမှာ ဦးစိုးမောင် (ခ) ဦးကျော်စိုး ဖြစ်သည်။
'''ဘိတ်ကလာတဲ့ ငံပြာရည်''' (၂၈ ဧပြီ ၁၉၂၄ – ၁၉၉၂) သည် မြန်မာအမျိုးသားနာမည်ကျော် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာကြီးတစ်ဦး ဖြစ်သည်။
ဘိတ်ကလာတဲ့ငံပြာရည်၏တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး, အမည်ရင်းမှာမြိတ်မြို့ဇာတိ ဦးစိုးမောင်အဖ (ခ)- ဦးကျော်စိုးဦးရွှေကြာ၊ ဖြစ်သည်။အမိ ၁၉၂၄- ခုနှစ် ဧပြီလဒေါ်ထူးမေတို့က (၂၈-၄-၁၉၂၄) ရက်နေ့တွင်ရက် [[တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး]]၊ [[မြိတ်မြို့]]၌ ဦးရွှေကြာနှင့် ဒေါ်ထူးမေတို့က မွေးဖွားခဲ့သည်။တနင်္လာနေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ မွေးချင်းသုံးယောက်အနက် အကြီးဆုံး သားဖြစ်ကာသား၊ ၁ဝ တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက်တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီး ကျောင်းဆက်မတက်ဖြစ်ဘဲကျောင်းဆက်မတက်ဖြစ်၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း အမြတ်ခွန်အရာရှိအဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ တာဝန်အရ အခွန်ကြီးကြပ်ရာမှ ရုပ်ရှင်လောကသားများနှင့်ရုပ်ရှင်လောက တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသားတုိ့နှင့် ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး ပဲရော့ ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဒါရိုက်တာပဲရော့ ဦးဖေကြိုင်နှင့်ဖေကြိုင်နှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးခွင့်ရခဲ့သည်။ ဦးဖေကြိုင်ထံမှဦးဖေကြိုင်ကို လက်ဦးဆရာအဖြစ် ဦးထိပ်ထားလျက် ဆရာထံမှ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး ပညာများသင်ယူခဲ့သည်။ ဦးကျော်စိုးသည် ပန်းချီ ကာတွန်းရေးဆွဲမှု ဝါသနာပါသည့်အတွက် အနုပညာဓာတ်ခံရှိသူပီပီ ရုပ်ရှင်ပညာများ လေ့လာရာတွင် တတ်သိလွယ်သည်။ ထို့နောက် ရုပ်ရှင်နှင့်ပတ်သက်၍ ဝါသနာဆန္ဒပြင်းပြသည့်အတွက် ဝန်ထမ်းဘဝမှ နုတ်ထွက်၍ ရုပ်ရှင်လောကသို့ ခြေစုံပစ် ဝင်ရောက်ခဲ့သည်မှာ ကွယ်လွန်ချိန်အထိ ဖြစ်သည်။ ▼
နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာကြီး၊ ဟာသရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားများကိုသာ ဇောင်းပေးရိုက်ကူးခဲ့သူ ဘိတ်ကလာတဲ့ ငံပြာရည် ဦးကျော်စိုး ဟာသ Specialist၊ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သော်လည်း သူ၏အနုပညာ ပုံရိပ်တို့သည် တဖိတ်ဖိတ်တောက်ပနေဆဲ။ သင်္ကြန်ရောက် လေတိုင်း ရုပ်မြင်သံကြားမှ ပြသလေ့ရှိသည့် ''ကညာပျိုနှင့် ဇရာအို'' ဇာတ်ကားသည် ဆရာကြီး ရိုက်ကူးခဲ့ သည့် ဇာတ်ကားများအနက်မှ လက်ရာမြောက် ဇာတ် ကားတစ်ကား၊ အခါခါ ပြန်ကြည့်လည်း ရိုးအီသွားသည်မရှိ၊ ဒါရိုက်တာ အမည်မှည့်ပုံမှာ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောက တွင် အများနှင့်မတူ တစ်မူထူးခြားသည်။ ဟာသဆန်သည်။ မှတ်မိလွယ်သည်။ မိမိ၏ အနုပညာဂုဏ်ဒြပ်ဖြင့် မိမိဇာတိမြေကို တစ်ပြည်လုံး အမှတ်တရ သိစိမ့်သောငှာ အနုပညာအမည်မှည့်ခေါ်ခဲ့ပုံမှာ လေးစားစရာပင် ဖြစ်ပါသည်။
▲ဘိတ်ကလာတဲ့ငံပြာရည်၏ အမည်ရင်းမှာ ဦးစိုးမောင် (ခ) ဦးကျော်စိုး ဖြစ်သည်။ ၁၉၂၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် [[တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး]]၊ [[မြိတ်မြို့]]၌ ဦးရွှေကြာနှင့် ဒေါ်ထူးမေတို့က မွေးဖွားခဲ့သည်။ မွေးချင်းသုံးယောက်အနက် အကြီးဆုံး သားဖြစ်ကာ ၁ဝ တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက် ကျောင်းဆက်မတက်ဖြစ်ဘဲ အမြတ်ခွန်အရာရှိအဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ တာဝန်အရ အခွန်ကြီးကြပ်ရာမှ ရုပ်ရှင်လောကသားများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ပဲရော့ ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဒါရိုက်တာပဲရော့ ဦးဖေကြိုင်နှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးခွင့်ရခဲ့သည်။ ဦးဖေကြိုင်ထံမှ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး ပညာများသင်ယူခဲ့သည်။ ဦးကျော်စိုးသည် ရုပ်ရှင်နှင့်ပတ်သက်၍ ဝါသနာဆန္ဒပြင်းပြသည့်အတွက် ဝန်ထမ်းဘဝမှ နုတ်ထွက်၍ ရုပ်ရှင်လောကသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်မှာ ကွယ်လွန်ချိန်အထိ ဖြစ်သည်။
၁၉၅၅ ခုနှစ် မတိုင်မီ 'ပြည်တော်အေး' ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကို ထူထောင်ခဲ့ပြီး ပွဲဦးထွက်အဖြစ် ဒါရိုက်တာ 'ကျော်စံကေး' အမည်ခံယူကာ ''မေတ္တာပေါင်းကူး'' ဇာတ်
၁၉၅၅ ခုနှစ် မတိုင်မီ 'ပြည်တော်အေး' ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကို ထူထောင်ခဲ့ပြီး ပွဲဦးထွက်အဖြစ် ဒါရိုက်တာ 'ကျော်စံကေး' အမည်ခံယူကာ ''မေတ္တာပေါင်းကူး'' ဇာတ်ကားကို မင်းသား ထွန်းဝေ၊ မင်းသမီး ခင်ယုမေတို့နှင့် ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ ဆက်၍ကာတွန်းအောင်ရှိန်၏ ''ရှံစား-ဒိန်းဒေါင်'' ဇာတ်ကောင် ဇာတ်လမ်းများကို ရုပ်ရှင်အဖြစ် အသက်သွင်းခဲ့လေရာ ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ''မှားတဲ့အခါလည်း မှားပေမပေါ့'' နှင့် ''အောင်ပင်လယ်'' ဇာတ်ကားများကို လည်းကောင်း၊ ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် ''ကဲမယုံချင်နေ'' ဇာတ်ကားကိုလည်းကောင်း ရိုက်ကူး ရုံတင်ပြသခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဒါရိုက်တာ 'ကျော်စံကေး' အမည်မှ ''ဘိတ်ကလာတဲ့ ငံပြာရည်'' အမည်ကို ပြောင်းလဲခံယူကာ ၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင် ပြည်တော်အေး ရုပ်ရှင်မှပင် ''အံ့ဩကုန်နိုင်ဖွယ်'' ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးရုံတင်ပြသခဲ့သည်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် ''ပြည်တော်အေး'' ရုပ်ရှင်အမည်မှ ''ကျော်စိုး'' ရုပ်ရှင်အမည်သို့ ပြောင်း၍ ဒါရိုက်တာ ''ဘိတ်ကလာတဲ့ ငံပြာရည်'' အမည်ဖြင့်ပင် ''ရှံစား -ဒိန်းဒေါင်'' ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်သော ''ပင့်ကူနီ'' ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူး ရုံတင် ပြသခဲ့သည်။ ထိုမှဆက်၍ ဘိတ်ကလာတဲ့ ငံပြာရည် အမည်ကိုတောက်လျှောက်အသုံးပြုလေသည်။ ▼
ကားကို မင်းသား ထွန်းဝေ၊ မင်းသမီး ခင်ယုမေတို့နှင့် ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ ဆက်၍ကာတွန်းအောင်ရှိန်၏ ''ရှံစား[]-ဒိန်းဒေါင်'' ဇာတ်ကောင် ဇာတ်လမ်းများကို ရုပ်ရှင်အဖြစ် အသက်သွင်းခဲ့လေရာ ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ''မှားတဲ့အခါလည်း မှားပေမပေါ့'' နှင့် ''အောင်ပင်လယ်'' ဇာတ်ကားများကို လည်းကောင်း၊ ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင်
▲၁၉၅၅ ခုနှစ် မတိုင်မီ 'ပြည်တော်အေး' ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကို ထူထောင်ခဲ့ပြီး ပွဲဦးထွက်အဖြစ် ဒါရိုက်တာ 'ကျော်စံကေး' အမည်ခံယူကာ ''မေတ္တာပေါင်းကူး'' ဇာတ်ကားကို မင်းသား ထွန်းဝေ၊ မင်းသမီး ခင်ယုမေတို့နှင့် ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ ဆက်၍ကာတွန်းအောင်ရှိန်၏ ''ရှံစား-ဒိန်းဒေါင်'' ဇာတ်ကောင် ဇာတ်လမ်းများကို ရုပ်ရှင်အဖြစ် အသက်သွင်းခဲ့လေရာ ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ''မှားတဲ့အခါလည်း မှားပေမပေါ့'' နှင့် ''အောင်ပင်လယ်'' ဇာတ်ကားများကို လည်းကောင်း၊ ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် ''ကဲမယုံချင်နေ'' ဇာတ်ကားကိုလည်းကောင်း ရိုက်ကူး ရုံတင်ပြသခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဒါရိုက်တာ 'ကျော်စံကေး' အမည်မှ ''ဘိတ်ကလာတဲ့ ငံပြာရည်'' အမည်ကို ပြောင်းလဲခံယူကာ ၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင် ပြည်တော်အေး ရုပ်ရှင်မှပင် ''အံ့ဩကုန်နိုင်ဖွယ်'' ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးရုံတင်ပြသခဲ့သည်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် ''ပြည်တော်အေး'' ရုပ်ရှင်အမည်မှ ''ကျော်စိုး'' ရုပ်ရှင်အမည်သို့ ပြောင်း၍ ဒါရိုက်တာ ''ဘိတ်ကလာတဲ့ ငံပြာရည်'' အမည်ဖြင့်ပင် ''ရှံစား -ဒိန်းဒေါင်'' ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်သော ''ပင့်ကူနီ'' ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူး ရုံတင် ပြသခဲ့သည်။ ထိုမှဆက်၍ ဘိတ်ကလာတဲ့ ငံပြာရည် အမည်ကိုတောက်လျှောက်အသုံးပြုလေသည်။
စုံထောက်ကြီး ဦးရှံစားအဖြစ် ဟာသမင်းသား သန်းနွဲ့၊ ဒိန်းဒေါင်အဖြစ် ဟာသသရုပ်ဆောင် မြင့်ဖေ၊
ဘိတ်ကလာတဲ့ငံပြာရည်သည် ၁၉၉၂ ခုနှစ် တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးရိုက်ကူးသွားခဲ့သည့် ဇာတ်ကား မှာ ''ခုနစ်ဖော်မောင်နှံ'' ဖြစ်သည်။
(ဒိန်းဒေါင်အဖြစ် သာဆန်း) တို့ကို အဓိကထားရိုက်ကူးခဲ့သော မှားတဲ့အခါလည်း မှားပေမပေါ့၊ အောင်
ပင်လယ်၊ ကဲမယုံချင်နေ နှင့် ပင့်ကူနီ ဇာတ်ကားတို့ကို
ဆင့်ကဲ ဆင့်ကဲ ရုံတင်ပြသလိုက်သည့်အခါ ရှံစား- ဒိန်းဒေါင်၏ အောင်မြင်မှုများကားကြောက်ခမန်းလိလိ၊ ပြသရာနေရာတိုင်း ရုံပြည့်ရုံလျှံ၊ တိုင်းသိပြည်သိ လျှမ်းလျှမ်းတောက် ထင်ပေါ်ကျော်ကြား လေတော့သည်။
ထိုစဉ်က ''စံရှား-ဒိန်းဒေါင်'' ၏ ပဏာမ တေးဖြစ်
သော ''နိုင်ငံကျော် ဦးစံရှား အများသိကြလေနော် ...
ပြိုင်စံ မပေါ် ဦးစံရှား အများသိကြသနော် ...စံရှား-ဒိန်းဒေါင် ... စံရှား-ဒိန်းဒေါင် ပြည်ဘောင်ကျော်ကြား
တာ'' တေးသီချင်းသည် ကလေးများသာမက လူကြီး
များ၏ ပါးစပ်ဖျားမှာပါ ရေပန်းစားခဲ့လေ၏။ ''ငံပြာရည်တစ်စက်၊ ဟာသတစ်ကွက်'' သည် ဆရာကြီး၏ လက်ကိုင်ဆောင်ပုဒ်၊ ''ဘိတ်သားက ဟာသကားပေါင်းများစွာ ဖန်တီးပြမည်'' ဆိုသည့်သဘော၊ အပြောနှင့်အလုပ် တစ်ထပ်တည်းကျအောင် သက်သေပြနိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
ဆရာကြီး နောက်ဆုံးရိုက်ကူးသွားခဲ့သည့် ဇာတ်ကား
မှာ ''ခုနစ်ဖော်မောင်နှံ''ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်ပြီး၎င်းဇာတ်ကားမှာ၇နှစ်ခန့်ဆက်တိုက်ဝင်ငွေအများဆုံးစံချိန်တင်ခဲ့သည်။ ဆရာကြီးသည် ၁၉၉၂ ခုနှစ်
တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ ထိုဇာတ်ကား ရုံတင်ခဲ့သည်ကိုပင် ကြည့်မသွားလိုက်ရရှာ။ ဒေါ်အေးအေးညွန့်နှင့် ဆရာကြီး ဖူးစာဆုံခဲ့ပြီး သားသမီးခုနစ်ယောက် ထွန်း ကားခဲ့သည်။ သူ၏ သားသမီး မြေးများကလည်း ဘမျိုး ဘိုးတူ၊ ဆရာကြီး၏ တန်ဖိုးကြီးမားလှသော အနုပညာအမွေကို တာဝန်ကျေပွန်စွာ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်လျက်ရှိသည်။ သမီးဖြစ်သူ သက်ကျော်စိုး က ဒါရိုက်တာသမီး ငံပြာရည်အဖြစ်နှင့်လည်းကောင်း၊ သားဖြစ်သူ သီဟကျော်စိုးနှင့် ဆရာကြီး၏ မြေးဖြစ်သူ ပြည်ဟိန်းသီဟ၊ တို့ကလည်း အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းနေ သော ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာများအဖြစ်နှင့်လည်းကောင်း ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။ အခြား မျိုးဆက်များဖြစ်ကြ သော . ဒါရိုက်တာ အောင်လင်းနိုင် ၊ အာကာဟိန်း ၊ ချို ၀တ်ရည် တို့သည်လဲ ရုပ်ရှင် ဗီဒီယို နယ်ပယ်အသီးသီး တွင် Music Video ဖန်တီးမှုများ ၊ Entertainment Program များ ၊ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတီးဖြတ်မှုများ အသီးသီးပြုလုပ်လျက်ရှိကြ ပြီး ကို အောင်လင်းနိုင်သည် Media9 Entertainment အားဦးစီးလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။
''ဘိတ်ကလာတဲ့ ငံပြာရည် အနုပညာအုပ်စု'' မှ ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် ရုပ်ရှင် နှင့် ဗီဒီယို ဇာတ်ကားပေါင်းကား မနည်းပြီ။ ရုပ်ရှင် လောကအတွက် များစွာအထောက်အကူ ဖြစ်စေခဲ့၏။
ရုပ်ရှင်သည် ပြည်သူ့အတွက် တာဝန်ကျေစွာ ဖန်တီး
တင်ဆက်ခဲ့လေသော ဦးကျော်စိုး (ခေါ်) နိုင်ငံကျော်
ဒါရိုက်တာကြီး ''ဘိတ်ကလာတဲ့ ငံပြာရည်'' ကောင်းရာ သုဂတိလားပါစေ . . .
ဒါရိုက်တာ ဘိတ်ကလာတဲ့ငံပြာရည် (ဦးကျော်စိုး)
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/541957" မှ ရယူရန်